I-Bolt yokuPhakamisa i-D Shackle, i-Us Type Drop Drop For Shackle-Shenli Rigging
Ukhathalelo loMthengi +
Ikhonkco elikhulu kunye nendibano
Inkampani yethu iye yaba yinkokeli yokuphakamisa kunye nokuloba ngomzi mveliso ngokuba ngomnye wabazobi abaphambili bokuphakamisa imigangatho yeebhloko eziphumelele iSatifikethi se-SAC (uLawulo loMgangatho we-PRC).
Iimfuno zobuGcisa boKhuseleko kwi-CE Certification Hook
Indlela yokuphakamisa amandla omntu yokuloba, ngamaxesha e-1.5 umthwalo olinganisiweyo njengovavanyo lomthwalo wovavanyo. Indlela yokuphakamisa ikhonkco yokuqhutywa kwamandla, amaxesha ama-2 umthwalo olinganisiweyo njengovavanyo lomthwalo wovavanyo. Susa uvavanyo lomthwalo wokuloba, akufuneki ubenazo naziphi na iziphene ezibonakalayo kwaye wandise iqondo lokumka, o ...
Uhlobo lwe-Matte Black Bow Anchor Shackle nge-Screw Pin
Elungiselelweyo Matte emnyama iankile ngetyathanga elinamaxesha ama-6 okhuseleko kwinqanaba lolwakhiwo lwecandelo kubandakanya iankile, amakhonkco e-clevis, amagwegwe wamehlo, amakhonkco okuqhagamshela, amakhonkco enkosi, amabakala e-8 amatyathanga awasetyenziswanga kuphela ekuphakamiseni umzi mveliso okanye ioyile kunye negesi, sinokwenza b kwi b ...
I-DSL (i-Hebei Shenli Rigging Co., Ltd) ikumema ukuba ulandele i-15.4h23 Booth ye-128th Online Canton Fair.
Ubhubhane oqhubekayo we-COVID-19 otshabalalisa umhlaba unyanzelise ukumiswa kwenguqu ye-127th yeCanton Fair. Emva kweenyanga ezimbini zokulungiselela, i-128TH CANTON FAIR iya kubanjwa bukhoma kwi-Intanethi ngomhla we-15 kaJuni DSL, u-Hebei Shenli Rigging Co., Ltd） okhethekileyo kwimveliso yokufikelela ...
Idilesi: Indawo yoShishino yaseDonglv, isiXeko saseBaoding, eHebei, China